Fiaraha-miasa amin’ny Amerikanina : hasiam-panavaozana ny lalàna momba ny solika | NewsMada
Fiaraha-miasa amin’ny Amerikanina : hasiam-panavaozana ny lalàna momba ny solika
Nanomboka ny taona 2015, misy ny fiaraha-miasa amin’ny Departemanta amerikanina, momba izay hanampiana ny lafiny teknika EGCI* an’i Madagasikara eo amin’ny fitrandrahana solika sy gazy. Mandalo eto an-toerana ny delegasiona misahana ny fandaharanasa (EGCI)* tarihin’ny filohany, Levi White, izay nihaona tamin’ny minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny solika.
Tanjona amin’izany fandaharanasa EGCI izany ny hahatonga an’i Madagasikara ho tsara toerana eo amin’ny fitrandrahana solika sy gazy, toy ireo firenen-kafa malaza amin’io sehatra io. Voaporofo manana ireo harena an-kibon’ny tany azo trandrahina tsara ireo i Madagasikara, loharanom-bola goavana hanaovana asa fampandrosoana maro. Faritana ao anatin’izany ny hanampiana ny eto an-toerana ho tompon’andraikitra feno ho amin’ny fahaiza-mitrandraka ireo angovo ireo.
“Efa tamin’ny fotoana nanaovana fikarohana ny lalàna momba ny solika (code pétrolier), raha ny eto Madagasikara. Amin’izao fotoana izao, efa tonga eo amin’ny fitrandrahana isika, toy ny ataon’ny orinasa Madagascar Oil. Marina fa mbola solika mavesatra izany, nefa tokony hapetraka amin’izay izao ny lalàna mifandraika amin’ny fitrandrahana”, hoy ny minisitra Zafilahy Ying Vah. Maro ny orinasa avy any ivelany te hiditra hampiasa vola eto ho amin’ny fitrandrahana solika. Mandresy lahatra sy misintona mpampiasa vola amin’izany sehatra izany ny fivorian’ny mpamatsy vola ho an’i Madagasikara natao tany Paris, ny volana desambra 2016.
Hamafisina amin’izany fandaharanasa izany ny lafiny teknika, ohatra, ny fampiasana teknolojia ; ara-bola, eo amin’ny fitantanana ; fanarahan-dalàna, amin’ny fampiharana lalàna iraisam-pirenena ; ary tsy ambanin-javatra ny fiarovana ny tontolo iainana. Manampy izany ny sampandraharaha amerikanina hafa, toy ny Bureau de gestion de l’énergie océane (BOEM), Bureau de la gestion des terres (BLM) sy ny maro hafa. Ny tanjona itoviana ny fitantanana ao anatin’ny mangarahara, hitondra fampandrosoana marina ara-toekarena sy sosialy.
EGCI* : Initiative pour la gouvernance et les capacités dans le secteur de l’énergie.